Dhawunirodha mitambo yemahara paPlayStation4, maitiro ekuzviita mumatanho akapusa | Gadget nhau
Dhawunirodha mahara emitambo paPs4, maitiro ekuzviita nematanho akapusa
Parizvino kutamba mitambo yemavhidhiyo hakuna kudhura kana isu tatova neazvino koni, senge mune ino Playstation 4, Tine huwandu hwemitambo yeFreetoplay iyo yekudyara mairi maawa asina basa matinongoda kuve pamba nefeni kana mhepo yekudzivirira yakaiswa mukati. Katarogu yemitambo yemahara iri kuwedzera zvakanyanya uye izvo zviri nekuda kwekugamuchirwa kukuru kwavakaitwa neruzhinji rwevanhu, kusvika pakuve inonyanya kufarirwa pakati pevamwe vatambi.
Ichi chiitiko chave chakakurumbira kunyanya nema-smartphones uko iyo yega mitambo inobudirira ndeye mahara evanotenga mu-app. Izvi imhaka yekuti kutamba kusununguka, asi nezvakawanda zvinogumira. Zvikanganiso zvinotangira kubva kune yakashomeka nhamba yenyika kana mazinga, kana kungoita aesthetic yekuwedzera zvemukati senge zvombo zvekupfura kana zvipfeko zvakasiyana. Iyi bhizimusi modhi yakagamuchirwawo nevanonyaradza, ichiwana akasiyana siyana paPlayStation 4. Muchikamu chino tiri kuzoratidza maitirwo azvo uye ndeapi atinoona anonyanya kufadza.
1 Ndekupi uye sei ini ndinowana iyi mitambo pane yangu PlayStation 4?
2 Kuwa Vakomana: Ekupedzisira Knockout
3 World Of Warships: Ngano
7 Nyeredzi Kutenga Online
Ndekupi uye sei ini ndinowana iyi mitambo pane yangu PlayStation 4?
Izvo zviri nyore sekupinda muchitoro nekudzika pasi runyorwa kwatinowana chikamu che "Mahara", mukati tinowana zvikamu zvitatu:
Kuongorora: Kwatinogona kutarisa kwakazara pane izvo chitoro pachacho chinokurudzira, Aya mazano anowanzochinja kazhinji.
Pfungwa huru Muchikamu chino tichawana mutambo wakatanhamara wenguva ino, kana iye akagamuchira zvakanyanya nhau.
Mahara: Pakupedzisira pano tinogona kuona zvese zvemahara zvemukati izvo PlayStation inotipa isu zvizere.
Isu tinorangarira kuti kunyangwe iyi mitambo iri yemahara, zvimwe zvemukati izvo zvatinoda kuwana zvichabhadharwa. Zvisinei, huwandu hwakawanda hwemitambo iyi haudi PlayStation zvakare, kunyangwe kana tichida kunakidzwa nenhamba huru yemitambo pamwedziIni ndinokurudzira zvikuru kubhadhara kunyoreswa sezvo mhando yemazita aya iri yepamusoro kwazvo.
Kuwa Vakomana: Ekupedzisira Knockout
Haisi yemahara mutambo wakadai, nekuti mairi mamiriro epakutanga anodhura € 19,99, asi mwedzi uno Playstation Plus iri kuzvipa, pasina mubvunzo chinokwezva chinopfuura zvakakwana kubvuma kubhadhara izvo 5 € mwedzi nemwedzi izvo zvinodhura iyo yekuwedzera.
Iyo Hondo royale yemitambo midiki iyo inotiyeuchidza nezvezvinyorwa zveterevhizheni zvirongwa seHumor Amarillo kana Grand Prix. Zvinonzwika senge zvinonakidza uye ndizvo. Bvunzo yega yega inova nhangemutange yakakura yekupasa bvunzo nekukurumidza sezvazvinogona, mairi 60 online vatambi vanokwikwidza kutenderera nekutenderera kuyedza kutanga kutanga mune imwe neimwe yadzo. Zvinonzwika kupenga sezvazviri chaizvo, nekuti pamusoro pevara rayo rekubheja, kunaka kwayo kwakasarudzika uye kunonakidza kuiridza.
World Of Warships: Ngano
Kubva kuvakagadziri veWorld Of Tanks, ichi chinzvimbo chevazhinji chinotiendesa kumakungwa makuru uko kwatinozotora chikamu muhondo yechokwadi yemakungwa. Zvichatitakura isu kuenda kuhondo seyakajeka uye nhoroondo seyechipiri Hondo Yenyika. Tichava nemireza, kusanganisira vanotakura nendege, vaparadzi, mafriji kana zvikepe zvehondo.
Iine ngarava dzinopfuura mazana maviri dzinosarudza kubva kunyika dzese dzinotora chikamu mumakakatanwa akaita sehondo, uyu mutambo wevhidhiyo wakasarudzika, sezvo paine mitambo mishoma yemavhidhiyo inoratidza neicho chokwadi uye kuvimbika huwandu hwayo hwezvikepe zvehondo. Kunakidza uye kunakidza kune kunakidzwa kwevose vanoda rudzi urwu.
Izvi, semamwe maFTP mazhinji, zvine mamwe madiki ekubhadhara nawo ekuwana zvimwe zvekuwedzera kuwedzera hupenyu hwemutambo wevhidhiyo.
Iyi ndiyo imwe isingakwanise kushayikwa mune chero runyorwa rwemitambo yemahara uye izvi hazvigone kuve zvishoma, ndiyo Hondo Royale yeFona yeDuty. Uyu mutambo wevhidhiyo unovimbisa muhombe chiitiko chehondo pakati pevane zana vatambi. Tinowana Ma modhi emitambo anoshandura neyakagadziridzwa yega yega kuti aipe zvishoma zvakasiyana, tinogona kuwana iyo solo mode, duos, trios kana quartets. Pasina mubvunzo, chinonyanya kufadza nezve mutambo uyu kuunakidzwa neshamwari, nekuti zvinongorasikirwa nechikamu cheicho chinhu.
Hondo royale modhi shanduko yezvakaonekwa neBlackout muBlack Ops 4, ichidzorera zvimwe zvakaita se iyo Gulag, nzvimbo yatinozopedzisira tafa uye kwaticharwa nemuvengi munzvimbo yakaderedzwa, uyo anokunda duel iyi achadzoka kuupenyu pakuenda. Isu tinowanawo iyo Booty modhiMune ino modhi chinangwa chinenge chiri chekuwana mari yakawanda nekubatana nevamwe vatinoshanda navo, kupedzisa zviitiko zvakasiyana sekuuraya timu yevavengi kana kutora nzvimbo.
Mune ino kesi chiito uye yakavhurika nyika MMO mutambo wevhidhiyo zvinoenderana nema voxels, matinowana hukuru hukuru mune yakazara inoparara chivakwa uye chimiro nharaunda izere nevavengi, mazana ezvinhu zvekutora, kwatinogona kuwana zvimwe zvakagadzirwa nevamwe vashandisi, uye magejeri asingaverengeke kuti tikunde. Tichava nemakirasi gumi nemaviri evatambi vekusarudza kubva.
Kana zvese izvo zvarinopa mahara zvisina kukwana, isu tichava nekuwana kune yakawanda yemahara uye yakabhadharwa yekuwedzera muChitoro, asi ruzhinji rwayo rwunongowanikwa chete nekutamba.
Chinhu chikuru che chiito nebasa Mushandirapamwe umo vatambi vanosvika vana vachakurudzirwa kuvhima zvisikwa zvakakura zvengano, zvimwe zvacho zvichizivikanwa seBehemoths, vagari venyika inonakidza yemafaro ichaunza uyu mutambo wevhidhiyo kuhupenyu.
Iyo yekurwa system inotiyeuchidza zvishoma yemimwe mitambo yemavhidhiyo senge Rima Remweya kana Monster Hunter. Tine mukana wekugadzira zvombo zvedu nemidziyo yekudzivirira nekuda yakasimba yekugadzira maitiro, uko kugadzirisa kunooneka.
MMO yakavakirwa pane inomhanya-mhanya Star Trek saga, umo matichatora kuraira kwemutungamiriri wesangano reUnited Planets, Humambo hweKlingon kana maRomulans. Tichatarisana nemamishinari akasiyana ekutsvaga, ekuzvidzivirira uye ekurwisana kwenzvimbo.
Nyeredzi Kutenga Online ichatibvumidza isu kwakawanda kugadzirisa chikepe chedu nemhando dzakasiyana siyana dzehunyanzvi. Tichakwanisa kukwirisa hunhu hwedu uye nekuwana hunyanzvi hunyowani hwekuzvidzivirira kubva kune dzakawanda njodzi dzakatimirira muchadenga.
Tichava nezvakawanda zvakasiyana zvemicrosoft kubhadhara kuti tiwane zvikepe zvine mukurumbira, kunyange hazvo ruzhinji ruchazokwanisa kuzviwana mumutambo wacho pachawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Musha » videogames » Dhawunirodha mahara emitambo paPs4, maitiro ekuzviita nematanho akapusa
AJAX, yako yakazara chengetedzo system
HONOR 9A, yehupfumi vhezheni inovimba nebhatiri [KUDZIDZISA]